लक्ष्मी समान हुन्छन् यस्ता नारीहरु, भित्र्याउँछन् परिवारमा खुसीनै खुसी « गोर्खाली खबर डटकम
लक्ष्मी समान हुन्छन् यस्ता नारीहरु, भित्र्याउँछन् परिवारमा खुसीनै खुसी
२०७७ भाद्र १५ गते सोमवार प्रकाशित
काठमाडौँ । नारी आफैमा एक अद्भूत शक्तिकी खानी हुन । त्यसकारण नारीलाई माता दुर्गा, लक्ष्मी अर्थात सरस्वतीको रुपमा लिइन्छ । तर नारी भन्ने बित्तिकै नारीको देह भएर पुग्दैन् । त्यसको लागि नारिको रुप, स्वभाव, प्रवृत्ति, चालचलन, सोच, विचार जस्ता अनेक कुराहरुलाई लिइन्छ । साच्चै भन्नुपर्दा नारी एक कोमल हृदयकी खानी हुन् ।नारीमा एक प्रकारको सहृदयी भाव रहेको हुन्छ । यद्यपी धार्मीक शास्त्रले पनि नारी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरेको छ । हेरौँ एक असल नारीमा कस्तो कस्तो गुणहरु हुन्छन् त ।
१. मिठो बोली बचन, मधुर आवाज, हरेक क्षण मायालु व्यवहार दर्शाउँछन् । २.जुन नारीमा सेवा भाव, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमानी, दयाभाव, कर्तव्य निष्ठ हुने गर्छन् । ३.जुन नार तनले हैन मनले सुन्दर रहेकी छन् । ४.जुन महिला घरमा आएका पाहुनलाई हार्दिकताको साथ घरमा स्वागत सत्कार गर्छिन् । ५.अरुको दुखमा आफ्नो दुख सम्झेर दुख बाट मुक्ति पाउँदा आफुलाई आनन्द भएको अनूभूत गर्ने नारी ।
६. आफ्नो घरका सबै सदस्यबाट उत्तिकै रुपमा श्रद्धा, प्रेम सम्मान पाएका नारी । जो सबैसँग मिठो बोल्ने, स्वास्थकर खाना खुवाउने गर्छिन् । ७.जो हरेक दिन स्नान गरेर स्वच्छ सफा र स्वच्छ वस्त्र लगाउने गर्छिन् । ८.जुन नारी घरलाई शान्तिमय बनाउन हरेक दिन बिहान बेलुका पुजा आज गर्छिन्, दीप बालेर घरलाई सुगन्धित र बास्नामय बनाउँछिन् ।
९.जो पतिव्रतको पालना गर्छिन् । १०.आफ्नो घरमा धर्म र नितिको मार्गमा हिड्न सबैलाई प्रेरित गर्छिन् ।
पुस-माघसम्म तीन करोड २३ लाख खोप आइसक्छ: स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ
आज यि स्थानमा हुनेछ अति भारी वर्षा र उच्च बेगको हावाहुरी , सतर्क रहन मौसम बिभागको २४ घण्टे चेतावनी